स्वदेशी तरकारी खाल्डोमा, आयातित तरकारी भान्सामा – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/स्वदेशी तरकारी खाल्डोमा, आयातित तरकारी भान्सामा
१९ जेठ, काठमाडौं । तरकारी तथा फलफूलबाट कोरोना सर्ने अहिलेसम्म संसारमा कुनै पनि अध्ययनले देखाएको छैन । तर, नेपालमा चाहिँ कोरोना सार्न सक्ने भन्दै किसानले दुःख गरी उब्जाएका तरकारी-फलफूल नष्ट गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ, त्यो पनि सरकारी निकायहरुकै रोहबरमा ।स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनले नै तरकारी-फलफूलका ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिँदै नष्ट गराउन थालेका हुन् । जबकि भारतबाट आयातित तरकारी-फलफुल भने निर्वाध उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगिरहेका छन् ।
दुःख गरेर उब्जाएका तरकारी दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्री हुन छाडेपछि किसानहरु आफ्नो उत्पादनमाथि ट्याक्टर चलाएर नष्ट गर्न थालेका छन् । चितवन, काभ्रे, कपिलवस्तु र रुपन्देहीको कृषकहरु उत्पादित तरकारी नबिकेर रोईकराई गरिरहेका बेला अर्घाखाँची र कास्की जिल्लामा भने स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनकै संलग्नतामा हरियो तरकारी तथा फलफूलहरु नष्ट गर्ने अभियान चलाइएको छ ।
अर्घखाँचीको सन्धिखर्कमा आइतबार एक ट्रक हरियो तरकारी नष्ट गरियो । कपिलवस्तुको बुद्धभूमीबाट विक्रीको लागि लगिएको हरियो तरकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिक्री गर्न रोक लगाएपछि नष्ट गरिएको हो ।
कोरोना रोकथाम गर्ने सर्वपक्षीय बैठकले गरेको सहमति बमोजिम छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन रोकिएको अर्घाखाँचीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिक्रम थापाले बताए । लुकाई-छिपाई ल्याइएपछि फिर्ता गराउन भनिएपनि व्यवसायी आफैंले नष्ट गरेको उनको भनाइ छ ।
‘जताबाट ल्याएको हो उतै फर्काउन भनेका थियौं, तर आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध बिगि्रने भन्दै व्यवसायीले आफैं तरकारी नष्ट गरेका हुन् । प्रहरी वा जिल्ला प्रशासनलाई दोष लगाउन मिल्दैन,’ सहायक प्रजिअ थापाले भने ।
कास्कीमा ६ ट्रक तरकारी र फलफूल पुरियो कास्कीको पोखरा लेखनाथ नगरपालिका १५ का स्थानीयले जेठ १५ गते तरकारी र फलफूल बोकेका ६ वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिए । काभ्रे, चितवन, लगायतका जिल्लाबाट बिक्रिका लागि लगिएको गालभेंडा लगायतका तरकारी उनीहरुले राती २ बजे नियन्त्रणमा लिएका थिए । बिहान वडा प्रमुख, प्रहरी र स्थानीय डोजरले खाल्डो खनेर उक्त तरकारी तथा फलफूल नष्ट गरे ।
फोटोः गण्डकी टिभी तरकारी ओसार पसार गर्दा कोरोना जोखिम उच्च भएकाले नष्ट गरिएको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेल बताउँछन् ।पृथ्वीचोकमा रहेको बास्तोला स्टोरमा तरकारी पसल चलाउँदै आएका हरि गौतमले ल्याएका तरकारी कास्कीमा नष्ट गरिएको थियो ।
तरकारी र फलफूल रोक्ने नीति कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले देशैभर फलफूल र तरकारीको आयात रोक्ने नीति लिएका छन् । अर्घाखाँचीमा जेठ ५ गते बसेको कोरोना रोकथाम गर्ने सर्वपक्षीय बैठकले बाहृय जिल्लाबाट तरकारी र फलफूल ल्याउन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
यता पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको जेठ ११ गते बसेको सर्वपक्षिय बैठकले कोरोना महामारी भित्रिन सक्ने भन्दै छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी र फलफूल ल्याउन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वपक्षीय समितिले कोरोना रोक्न यस्तो निर्णय गरेको महानगरको १५ का वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए । कोरोनाबाट समाजलाई जोगाउन व्यवसायीकै सहमतिमा यस्तो निर्णय भएको यस्तो कदम चालिएको वडा अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
मन्त्रालय भन्छ : दुखी छौं
कोरोनालाई कारण देखाउँदै स्वदेशमा उत्पादित कृषि उपज नष्ट गर्न स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु लागेको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ । कृषि सामग्री, उत्पादनलाई कुनै खाले अवरोध नगर्ने मन्त्रालयले पटक-पटक आग्रह गरे पनि अटेर गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए ।
‘स्वदेशी कृषि उपज नष्ट गर्न लकडाउनको सुरुआतदेखि नै शृंखलाबद्ध हर्कत भएका छन्, यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि हामीले पटक पटक भन्यौ, तर कसैले सुन्दैन,’ प्रवक्ता केसीले भने ।
कृषि उपजमाथिको आक्रमण रोक्न जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयबाट र स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट लिखित पत्र पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषकको गतिविधिलाई सहजिकरण गरिदिन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पटक-पटक आग्रह गरेको तर नतिजा नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तरकारी-फलफूलबाट कोरोना सर्छ ?
कोरोना सर्ने भन्दै तरकारी र फलफूल नष्ट गर्ने अभियान चलाउनु स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको अज्ञानता भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बताउँछ । विश्वभर अहिलेसम्म तरकारी र फलफूल तथा खाद्यान्नका कारण कोरोना सरेको वा सर्न सक्ने कुनै वैज्ञानिक प्रमाण नभएको विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले बताइन् ।
‘बिक्रि केन्द्र भिडभाड भयो भने मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्छ, तर तरकारी र फलफूलबाट रोग फैलदैन,’ खाद्य सुरक्षा विज्ञ डा.जोशीले भनिन् ।
विश्वभर तथा नेपाली खाद्य वैज्ञानिकले गरेको अध्ययनमा पनि तरकारी र फलफूलबाट कोरोना सरेको कुनै प्रमाणित तथ्य नभेटिएको विभागले जनाएको छ ।
खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलबाट कोरोना नसर्ने र सर्न सक्ने सम्भावित अवस्थामा सुरक्षा उपायबारे विभागले सार्वजनिक अपिलमार्फत भनेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । तरकारी र फलफूलमा कोरोनाबारे जनप्रतिनिधिलाई विभागले पटक सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
भारतबाट निर्वाध आयात
लकडाउनका बीच पनि भारत लगायतका मुलुकबाट भने तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयात निरन्तर छ । खाद्यवस्तु तथा तरकारीबाट कोरोना सर्ने वैज्ञानिक कारण नपाइएपछि सरकारले आयात खुल्ला गरेको हो ।
लकडाउन भएको चैत ११ देखि जेठ ११ सम्मको अवधिमा नेपालले भारतबाट १ लाख ९९ हजार ७१ मेट्रिक टन खाद्यान्न, ७५ हजार ३ सय १५ मेट्रिक टन तरकारी, ५६ हजार ३ ५७ मेटि्रकटन गेडागुडी, २९ हजार ११५ मेट्रिक टन फलफूल र ११ हजार २ सय ४३ मेटि्रकटन दुग्धजन्य पदार्थ आयात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
लकडाउन भएको ४२ दिनसम्मको तथ्यांकमा नै ४ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी भारतबाट आयात भएको देखिएको थियो ।
थप ५ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या २५० पुग्यो
राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकता घोषणासभामा भाँडभैलो
संसारमा एकैदिन भेटिए आजसम्मकै धेरै संक्रमित